Muraayadaha muraayadaha indhaha ee haweenka Tilmaamayaasha Tuulada Madow / Madow - Hanukeii
WAA MAXAY HANUKEII?
NOLOSHA STYLE BLOG
Previo | Xiga
Tuulada Madow / Madow
Muraayadaha qoraxda Hanukeii® Iyaga waxaa abuuray oo loogu talagalay haweenka hadda jira, ee bilaashka ah iyo kuwa xiisaha leh. Vanguard, wada noolaanshaha iyo xorriyadda #BAREFOOTLIFE
LAYNIJIYADII LA SOO QAADAY
Qaab cusub oo hadda jira oo loogu talagalay dumarka avant-garde
Qeexitaano Sare Lenses TAC oo Khaldan
CAT.3 - ilaalinta UV400
Qaab dhismeedka ka sameysan ugu badan ee iftiinka polycarbonate.
Microfiber kiiska waxaa ka mid ah kaas oo aad ku keydin karto muraayadahaaga sidoo kale nadiifi kartid muraayadaha indhaha
Style, qurux, dabiici, qurux, casri, avant-garde ... Haweenka qarniga XNUMXaad kalsooni ayey ku tumanayaan. Haween ahaanshuhu wuxuu lamid yahay geesinimada. Ahaanshaha haweeney guuleysata waxay lamid tahay la dagaalankii dhumuc iyo dhumucba. Haween ahaanshu kama fiicna mana liito nin ahaan, waa wax si ka duwan taas oo waliba layaableh oo gaar ah. Waa kaamil ahaan dhammaystirka xoogga adduunka: wada noolaanshaha, dareenka, taabashada, tafaasiisha, fudeydka iyo kakanaanta isla waqtigaas.
En Hanukeii waxaan la jaanqaadnay baahiyaha naagta maanta jirta. Waxaan u abuureynaa badeecado loogu talagalay haweenka maanta garanaya waxa ay rabaan iyo sida ay u doonayaan iyo sidoo kale, waxaan siineynaa nolol iyo baashaal.
Waxaan jecel nahay inaan si deggan u noolaano oo wax walba ka sarreeya, waxaan jecel nahay inaan ku raaxeysano nolosha nabadda. #xurmada nolosha
Muraayadahaas muraayadaha indhaha ah waxaa lagu soo saaray muraayadaha muraayadaha indhaha oo awood u leh inay si wax ku ool ah uga hortagaan qorraxda tooska ah iyo sidoo kale dhalaalka iyo milicsiga ay soo saaraan iyagoo ka boodaya dusha sare ee dusha sare sida wadada laamiga, biyaha badda, iwm. Sidaa awgeed lagu gaarayo aragti aad u jilicsan oo raaxo leh iyo sidoo kale soo saarid midab dabiici ah iyo isbarbardhig.
Waxay leeyihiin ilaalinta UV400 ee qaybta 3, iyaga oo ka dhigaya xulashada ugu habboon ee lagu tababbarayo biyaha iyo cayaaraha jiilaalka, iyo sidoo kale inay ku habboon yihiin isticmaalka maalinlaha ah waxayna ku habboon yihiin wadista.
Muraayadaha indhaha Qeexid Sare FULL HD TAC Waxay ka samaysan yihiin maaddooyin bixiya kala-duwanaansho sare iyo cidhiidhi.
Ururintayada TUULADA waxaa dhiirrigeliyay dhammaan magaalooyinka yaryar, magaalooyinka badda, iyo magaalooyinka u dhow buuraha dhagaxa ka wada California ilaa kor ilaa hoose.
Layaab malahan in gees kasta oo gobolka ka mid ah oo aan booqannay ay raad nooga tagtay, maaddaama mid kasta oo ka mid ah ay na tustay qaniimooyin badanaa u muuqda in la iska indhatiro marka ay booqanayaan California dahabi ah.
Haddii shaki ku jiro meelaha qalbigeenna ka xaday wax kasta oo ka sarreeya oo noo horseeday inaan abuurno ururinta muraayadaha indhaha ee VILLAGE, waxay ahaayeen, geeska yar ee Waqooyiga Kaalifoorniya, Mendocino, waa magaalo ku taal buurta dusheeda oo ay ku hareeraysan yihiin hirarka badda oo in ka yar kun qof ay ku milmaan fanka iyo dabeecadda. Mid ka mid ah xaaladihii ugu quruxda badnaa ee aan ku noolaanay Mendocino waxay ahayd markii aan u kuur galnay sida qorayaasha iyo rinjiyeyaashu ula fadhiyaan buugaagtooda iyo jilciyada doogga, qorrax dhaca, si loogu muujiyo qaab ereyo iyo midabbo ah, wixii indhahoodu arkeen.
Magaalada kale ee yar ee sida joogtada ah maskaxdeena ugu soo muuqatay intii aan fulineynay naqshadeynta iyo habka wax soo saar ee aruurinta TUULKA, waxay ahayd Karmel-dhinaca-badda, halkaas oo aan ku aragnay qaab dhismeed iyo qaab-dhaqameed isku dhafan qaabka xeebta Californian dhismaha xasilloon ee jilicsan ee magaalo yar oo u muuqda sheeko la'aan.
Waxaan hubnaa in Kaliforniya ay tahay meesha noocyada kala geddisan, iskudhafka iyo dabcan, qaabka iyo moodeelka. Waxaa badanaa la yiraahdaa waxay ku taal bartamaha Kaliforniya halkaasoo isbeddelada dambe ee adduunka u socdaa ay ku dhasheen, taasna, ururkeenna TUULADA ayaa lagu soo koobay tan. Isbadal sameynta Californian abuurista nashqado geesinimo leh, "marwo" aad u badan, oo aan laga dareemi doonin liiska isbeddellada xilli ciyaareedkan.
Markay baashaal jirto walwal ma jiraan. Hanukeii waa wax ka badan eray kaliya, waa qaab nololeed, dareen, qaab ahaansho. Waxaan nahay jiil gabdho ah oo fahmay muhiimadda ay leedahay in tabashooyinka laga tago oo aan ku noolaano xilligan soo jeedka ballaaran ... Waxaan fahamsanahay sida ay faa'iido u leedahay in kabaha iska siibno, lugta caga-cag ku soconno oo aan iloobo walwalkaaga si aan ugu quusno xiisaha weyn ee nolosha. waa inuu bixiyaa, muujiyaa qurux iyo moodel xilli kasta.
Lama ogola xadka marka aad nooshahay a #BAREFOOTLIFE.
Baasifigga Madoow / Madow
Baasifigga Madoow / Madow 44.95 €
Marmar Baasifiga / Burgundy
Marmar Baasifiga / Burgundy 44.95 €
Baaskiil Baasifig / Madow
Baaskiil Baasifig / Madow 44.95 €
Guduud Tuulo / Madow
Guduud Tuulo / Madow 44.95 €
Tortoise Tuulo / Madow
Tortoise Tuulo / Madow 44.95 €
Waa maxay Hanukeii
Muraayadaha muraayadaha qoraxda
Muraayadaha muraayadaha indhaha
© 2021 Hanukeii. Dhammaan Xuquuqda Waa La Siiyey